ရန်ကုန်မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွင် စာသားသုံးစွဲမှု မှားယွင်းနေတယ်လို့ မြန်မာစာ ဆရာကြီးပြော – Burmese.asia
Homepage / News / ရန်ကုန်မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွင် စာသားသုံးစွဲမှု မှားယွင်းနေတယ်လို့ မြန်မာစာ ဆရာကြီးပြော
ရန်ကုန်မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွင် စာသားသုံးစွဲမှု မှားယွင်းနေတယ်လို့ မြန်မာစာ ဆရာကြီးပြော
By mzhPosted on August 2, 2020
မှ နဲ့ က ဘယ်ဟာအမှန်လဲလို့ မေးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ကြိုဆိုပါ၏ကသာ မှန်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှ နေပြည်တော်သို့၊ ရန်ကုန်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ မှန်တယ်။
နာမ်ဝိဘတ် ၁၆ မျိုးရှိတယ်။
1. သည်၊ က၊ မှာ = ကတ္တားဝိဘတ်
2. ကို = ကံဝိဘတ်
3. မှ၊ က = ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ်
4. သို့ = ရှေ့ရှုရာပြဝိဘတ်
5. သို့၊ ထိ၊ အထိ၊ ထိအောင်၊ တိုင်အောင် = ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ်
6. ဖြင့်၊ နှင့် = အသုံးခံပြဝိဘတ်
7. ကြောင့်၊ ဖြင့် = အကြောင်းပြဝိဘတ်
8. အား = လက်ခံပြဝိဘတ်
9. ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က = အချိန်ပြဝိဘတ် + နေရာပြဝိဘတ်
10. ၏ = ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ်
11. အလိုက်၊ အရ၊ အတိုင်း၊ အလျောက်၊ အားလျော်စွာ၊ နှင့်အညီ၊ နှင့်အမျှ = လိုက်လျောပြဝိဘတ်
12. နှင့်၊ နှင့်တကွ၊ နှင့်အတူ = ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ်
13. တွင်၊ အနက်၊ အထဲမှ၊ အထဲမှာ = ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ်
14. ငှာ၊ အလို့ငှာ၊ ဖို့၊ အဖို့၊ အတွက် = ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ်
15. တိုင်တိုင်၊ တိုင်အောင် = နေရာဆက်ပြဝိဘတ်
16. တိုင်တိုင်၊ တိုင်အောင်၊ ပတ်လုံး၊ လုံးလုံး = အချိန်ဆက်ပြဝိဘတ်
က = ကတ္တားဝိဘတ် + ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ် + အချိန်ပြဝိဘတ် + နေရာပြဝိဘတ်
မှ = ထွက်ခွါရာပြဝိဘတ်
သပြေကုန်းရွာက ကြိုဆိုပါ၏ကသာ သဒ္ဒါအရမှန်ပါတယ်။ က ကို စကားအသုံးလို့သာ ထင်မှတ်လို့ ဖြစ်ပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာမှာလည်း Welcome to လို့သာရေးရမှာကို Welcome from လို့မှားတတ်ကြတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွင် စာသားသုံးစွဲမှု မှားယွင်းနေတယ်လို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန ပါမောက္ခ (ငြိမ်း)မြန်မာစာ ဆရာကြီးမောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)က နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွင် ဆောင်းပါးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ ရန်ကုန်မြို့အဝင် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွင် “ရန်ကုန်မြို့ မှ ကြိုဆိုပါ၏”ဟုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဆိုင်းဘုတ် “မှ” သည် ထွက်ခွာရာပြကို ဆိုလိုသည့် အတွက် အရေးမှန်မှာ ရန်ကုန်မြို့က ကြိုဆိုပါ၏ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆရာကြီးက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆရာကြီး၏ဆောင်းပါးတွင် ဆရာကြီး မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ)က “ ပြောရရင်တော့ ၁၉၆၅ ခုလောက်က စမှား တာပေါ့ကွယ်။ သမီးတောင်မွေးအုံးမှာ မဟုတ်သေး ဘူး။ အဲဒီတုန်းက အစိုးရနဲ့ တောတွင်းက ပုဂ္ဂိုလ် တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ်။ ‌‌တောတွင်းကလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စကားတွေကို မြန်မာ့အသံကလွှင့်တော့ ‘ဗိုလ်ဘယ်သူမှ ပြောပါ သည်’၊ ‘ရဲဘော်ဘယ်သူမှ ပြောပါသည်’ ဆိုပြီး ‘မှ’ တွေသုံးတာ ပလူပျံနေတာပဲ။ သူတို့ရေးတဲ့ စာတွေ မှာလဲ ပြုလုပ်တဲ့သူကို ‘က’ မသုံးဘဲ ‘မှ’ တွေချည်း သုံးတာ။ အဲဒီစာတွေလဲ သင်ခန်းစာထဲ မှာ ပါတာကိုး။ လိုရင်းပြောရရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲပျက်သွားပြီး သူတို့သာ တောထဲ ပြန်သွားတယ်။ သူတို့သုံးခဲ့တဲ့ ‘မှ’ တွေကို ထားပစ် ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး သတင်းစာ တွေ၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေမှာ ‘က’ နေရာမှာ ‘မှ’ တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာတော့တာပဲကွယ်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဆရာကြီးက “ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ’ဆိုတာမျိုးသုံးရင်မှန်တာပေါ့။ ဒါတောင်‘မှ’ကို စာစကားအနေနဲ့ပဲ သုံးလို့ရတာလေ။ ‘ရန်ကုန်မြို့ မှထွက်ခွာပါတယ်’ လို့သုံးရင် အပြောစကားထဲ မှာ ‘မှ’ ကြီးဝင်နေလို့ ကန့်လန့်ဖြစ်နေတာပေါ့။ အပြောစကားမှာလဲ ‘ရန်ကုန်မြို့က ထွက်ခွာခဲ့ပါ တယ်’လို့ သုံးရတယ်။ ‘က’ က စာသုံးရော၊ အပြောသုံးရော ရတယ်။ ‘မှ’ က စာသုံးပဲရတယ်။ အပြောသုံးမရဘူး။ ပြီးတော့ ထွက်ခွာတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲရတယ်။ ပြုလုပ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်မရဘူး။ ဘဘကတော့ အစမှာပြောသလို မနေနိုင် လို့ ပြောရတာလေ။ နောက်ထပ်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ခံ့ခံ့ညားညား လုပ်အုံးမှာလို့ဆိုတော့ မြို့အထွက် ဆိုင်းဘုတ်ကိုလဲ ‘ရန်ကုန်မြို့က နှုတ်ဆက်ပါ၏’ လို့ ရေးမှမှန်မယ်ဆိုတာကိုပါ ကြိုကြိုတင်တင် ပြောပြတဲ့ သဘောပေါ့ကွယ်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Previous post ရုပ်ရှင်ထဲမှာ လူကြမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ မုဒိမ်းကောင်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး မျက်နှာကိုဘောလုံးနဲ့အပေါက်ခံရတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်/ဒါရိုက်တာ ဦးဇော်ထွန်
Next post သူမကြောင့် “ဟန်ငြိမ်းဦး” ဆိုတာ ဖြစ်လာတာလို့ ပြောလိုက် တဲ့ သင်းသင်း (ရုပ်သံ)